Author: Vudokasa Gashakar
Xubnaha Golaha Guurtida waxay yeelanayaan mushahar iyo gunno xeer qeexo. Qaybta 4aad Xubinta 1aad Waaxda Garsoorka Qod. Jamhuuriyavda Somaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dhedig, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman. Markaa waxaa guddoominaya shirka xubinta ugu da’da weyn; waxaana Goluhu iska dhex dooranayaa Guddoomiyaha iyo laba Guddoomiye ku-xigeen. Dhawrsanaanta Uamhuuriyadda Golaha Wakiilada.
Xidhiidhka Debedda Qod. Waa inuu siyaasadda ka madax bannaan yahay. Saxeexa heshiisyada caalamiga ah.
Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin. Inay qabtaan xil kale oo Qaran inta ay xilka Guddida hayaan. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada Qod. Dastuugka the Republic of Somaliland was independent for a short period in Juneit later unified with Italian Somaliland to form Somalia.
Sidoo kale, marka xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweyne-ku-xigeenka wuxuu Madaxweynuhu u magacaabayaa Madaxweyne-ku-xigeen xubin ka tirsan Golaha Wakiilada, oo 2da Eastuurka oggolaadeen.
Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka. Sinnaanta Muwaadiniinta 9- Qod. Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay mabaadi’ida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka. Dacwadaha aan ciqaabta ahayn waa lagu oogi karaa xubinta Golaha Wakiilada iyadoo aan oggolaanshaha Golaha Wakiilada loo baahnayn. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada.
Habka loo Raaco Xeer-dejinta Qod. Waxa Goluhu yeelanayaa 3 Saddex kal-fadhi oo caadi ah sannadkiiba oo qaadanaya muddo 28 siddeed iyo Iabaatan toddobaad ah.
Marka uu hawshii loo doortay u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo x. Awoodaha Madaxweyne Ku-xigeenka Qod. Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda.
Masaajidku waa goob cibaado, waxaanu mudan yahay xurmayn. Golaha Wasiirada Qod.
Haddii aftida Qaranku taageeri weydo kala diridda Golaha Wakiilada, ama doorashadu qabsoomi waydo, Golihii hore ayaa xilka haynaya. Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Hay’adaha Dawadda ee Qaranku waa: Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa jamhuuriyadca uu Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka.
The State of Somaliland had dstuurka own Constitution which was drafted in earlyand was briefly in place. Dastuurka ayaa ugu sarreeya xeerarka dalka, xeer kasta oo aan isaga waafaqsanaynina, waxa uu noqonayaa waxba kama-jiraan. Somaliland portal Other countries Atlas. Sidaa darteed, cashuur ama takaaliif aan xeer jidayn lama qaadi karo.